Shop4apps, keydka arjiga Motorola hadda waa rasmi | Androidsis
Waxaan horeyba uga hadalnay in Motorola ay diyaarinaysay bakhaar u gaar ah Codsiyada Android, Dukaan4Apps, iyo xitaa qaar ka mid ah snapsts-yada ayaa la qaadi karaa. Dukaankani ma ahayn sida kuwa oo kale Suuqa Android waana laga heli karaa xitaa biraawsarka webka. Soosaaritaankeedii ugu dambeeyay ee macaamiisha ayaa la filayaa Sannadka Cusub ee Shiinaha.
Hagaag, dukaankan waxaa horey si rasmi ah ugu soo bandhigay Motorola suuqa Shiinaha. Caqli ahaan waa halka Motorola ay hada ka hirgalisay seddex Terminal oo waa weyn waana inay ka faa'iideystaan. Dukaan4apps Waxaa loogu talagalay in qalab la siiyo horumariyeyaasha laftooda si ay kor ugu qaadaan barnaamijyadooda.
Horumariyayaashu waxay hadda bilaabi karaan inay soo gudbiyaan codsiyadooda Android si ay u galaan dukaanka SHOP4APPS ee cinwaanka http://developer.motorola.com.
Marka lagu daro wararka, Motorola waxay ku dhawaaqeysaa inay horumarinayso hawl awood u leh inay noo ogolaato inaan doorano bixiyaha raadinta ee aan dooneyno. Waxaan u qaadaneynaa in tan ay sabab u tahay khilaafka u dhexeeya Google iyo dowladda Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Shop4apps, bakhaarka arjiga Motorola hadda waa rasmi
Isbarbar dhiga qiimaha barnaamijka ee Android wadan ahaan